Mario Shopping Kart: Nintendo Unveils Tokyo Store to Lure Casual Gamers | Myanmar Business Today
Home Business Regional Mario Shopping Kart: Nintendo Unveils Tokyo Store to Lure Casual Gamers
Nintendo Co Ltd unveiled its first Japanese store in Tokyo’s trendy Shibuya shopping district, inastep towards greater commercialisation of its cast of popular characters.
Nintendo will look at how the store performs before considering further openings,aspokesman said.
Nintendo Co Ltd သည် တိုကျိုမြို့ရှိ လူသိများသော ဈေးဝယ်‌ရာနေရာဖြစ်သည့် Shibuya တွင် စတိုးဆိုင်ကို ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အင်္ဂါနေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဖက်ရှင်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် Parco စတိုးဆိုင်ဧရိယာရှိ Nintendo Tokyo စတိုးဆိုင်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဂိမ်းကစားသူများအတွက် ပင်မရေစီးထဲ ဝင်လာရန် ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပရိသတ်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူသို့ မဖွင့်လှစ်မီ သတင်းမီဒီယာများထံ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရာ အဆိုပါ စတိုးဆိုင်တွင် Mario၊ Link နှင့် Kirby စသော ဇာတ်ကောင်များပါဝင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ Legend of Zelda မှ ကုန်ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။
ကျိုတိုအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Nintendo Co Ltd အနေဖြင့် ယခုစတိုးဆိုင်၏ ရောင်းအားအခြေအနေများကို ကြည့်ကာ နောက်ထပ် ဆိုင်များ ဖွင့်မဖွင့် စဥ်းစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောသည်။
‘‘Nintendo ဆိုတာ ရေရှည်ကို ကြည့်တာ ကုမ္ပဏီပါ’’ ဟု ဂိမ်းထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း Famitsu Group ၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Mirokazu Mamamura က ပြောသည်။
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှာ လက်ရှိတွင် နယူးယောက်မြို့၌ စတိုးဆိုင်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီး Pokemon Center ၏ အောင်မြင်မှုအပေါ် အခြေတည်ကာ ဆက်လက်တည်ဆောက်နေသည်။
အဆိုပါ Pokemon Center စတိုးဆိုင်များမှာ Nintendo, Game Freak နှင့် Creatures ဂိမ်းကုမ္ပဏီများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် တည်ထောင်ထားသည် Pokemon Companyက စီမံခန့်ခွဲနေသည်။
Pokemon ၏ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ ကစားစရာအရုပ်များ ရောင်းချနေပြီး Disney စတိုင် pop-culture အင်ပါယာ တည်ဆောက်နေသည်။
အဆိုပါ အနေအထားမှာ ဇာတ်ကောင်များအပေါ် Nintendo ၏ ထိန်းချုပ်ထားပြီး လာမည့်နှစ်တွင် အိုဆာကာရှိ Universal Studios Japan တွင် ဧည့်သည် ဆွဲဆောင်ရန် နေရာအသစ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် Super Nintendo World အပါအတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များကို ချဲ့ထွင့်ရန် ကြိုးစားနေခြင်း အနေအထားနှင့် မတူပေ။
အနက်ရောင် နံရံနှင့် Pikachu အရုပ်များရေးချယ်ထားသည့် graffitiများပါဝင်သည့် Pokemon Center ကို ပြီးခဲ့သည့်လက လန်ဒန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် နာမည်ကြီးသွားခဲ့သည်။
SOURCESam Nussey (Reuters)
Previous articleOil Slips as Lack Of U.S.-China Trade Talk Progress Frays Investor Nerves
Next articleJapan Lower House Passes U.S. Trade Deal, Auto Tariffs Still in Question